Indawo yoMtyikityo yeTentrr-Ikampu yaseOhana Roots eSandy Pond, kwiNdawo yokuFihla eHlathi
Sijoyine kwi-43 yeehektare ezinemithi eSandy Pond! Indawo yethu yokukhempisha ibekwe embindini wepropathi ecaleni komsinga wonyaka wesithathu phantsi kwengubo yeHemlock endala, iBirch, kunye neMaple. Umgama oziikhilomitha ezi-4 ukusuka kwindawo yentente ukutyhubela ihlathi elingachukunyiswanga kukubeka kunxweme oluhle lwe-420 acre Sandy Pond apho unokonwabela i-kayak kunye nokuhamba ngephenyane, ukuqubha, ukuloba i-bass yomlomo obanzi, okanye ukuphumla kwi-floatie! Ukunyuka iihektare ezingama-43 zemilambo kunye neenduli ezinemithi, ihemlock kunye namahlathi aqinileyo kunye nomgxobhozo ofihlakeleyo ozele ziikati! Lala uphulaphule iiloon! (Indawo yokufihla ihlathi ayijongi edamini)
Ekoneni kukho indawo yokutyela edumileyo yaseKitchen elahlekileyo. Ezantsi nje kwendlela kukho iiHills ukuya elwandle indlela yokuhamba esuka eUnity ukuya eBelfast. I-Camp ikwimizuzu eli-11 kuphela ukusuka kwi-Common Ground Fair kunye nemizuzu engama-24 ukusuka kunxweme lwaseBelfast. (Ukuba ujonge amava enkampini ephambi kwamanzi, jonga enye indawo yethu ku https://www.tentrr.com/explore/Maine/Ohana-Roots-Camp-at-Sandy-Pond-Waterfront. Qaphela: Esi siza sifikeleleka kuphela ngokuhamba okanye ngephenyane!)
Indawo yokuzimela yasehlathini ecaleni komsinga wamaxesha amathathu kunye nokuhamba okufutshane kwihlathi elingachukunyiswanga ukuya kwi-420 acre Sandy Pond entle!
Emva kokuphuma, kuya kufuneka ushiye-kungekho-mkhondo wokuhlala kwakho kwaye uqiniseke ukuba indawo yakho yenkampu ibuyiselwe kuzuko lwayo lwendalo!Ngelixa uTentrr engahlawulisi mali yokucoca, silindele ukuba iinkampu zishiywe ngendlela ezifunyenwe ngayo.Emva kokuba uphumile, thatha yonke into oyingenisileyo kwaye uqiniseke ukuba ushiya inkunkuma yakho kwindawo echongiweyo kwipropathi.
Ukuba i-CampKeeper ingenisa ingxelo yesiganeko emva kokuhlala kwakho ukuba iinkcukacha zobungqina benkunkuma okanye umonakalo kwinkampu okanye kwipropati yeCampKeeper, i-Tentrr inelungelo lokuhlawula imali encinci yokucoca i-$ 50.Qiniseka ukuba ulandela i-Camper Manual ethunyelwe kwindawo yakho yenkampu kwaye uya kusekwa!
Uhlengahlengiso/UkuRhoxiswa Ngokubhukisha: Nceda uqaphele imiqathango yepolisi yokurhoxisa njengoko ichaziwe kwisiqinisekiso sakho sokubhukisha kwa-Airbnb.Ukuba ufuna ukurhoxisa okanye ukuguqula ugcino lwakho, nceda ufikelele kwiNkxaso yoMthengi weTentrr.ICampKeeper yakho ayikwazi ukutshintsha okanye ukurhoxisa ugcino lwakho egameni lakho. INkxaso yoMthengi weTentrr inokufikelelwa ku- (888) 798-9093 okanye kwi-hello@tentrr.com.
Emva kokuphuma, kuya kufuneka ushiye-kungekho-mkhondo wokuhlala kwakho kwaye uqiniseke ukuba indawo yakho yenkampu ibuyiselwe kuzuko lwayo lwendalo!Ngelixa uTentrr engahlawulisi ma…